1 Samuweli 1 (Xhosa)České uživatelské rozhraní
← URute 4 1 Samuweli 2 →
1 Ke kaloku kwakukho ndoda ithile yaseRama, umTsofi, yakweleentaba lakwaEfrayim, egama belinguElikana, unyanaunyana kaYeroham, unyanaunyana kaElihu, unyanaunyana kaTohu, unyanaunyana kaTsufi, wakwaEfrayim.
2 Yayinabafazi ababini; igamaigama lomnye lalinguHana, igamaigama lowesibini linguPenina; uPenina ke wayenabantwana, uHanauHana yena engenabantwana.
3 IndodaIndoda leyo ibinyuka ivela emzini wayo iminyaka ngeminyaka, iye kunqula, ibingelele kuYehova wemikhosi eShilo. Babekhona ke oonyanaoonyana bakaEli ababini, ooHofeni noPinehasi, ababingeleliababingeleli bakaYehova.
4 Kwathi ngemini awabingelela ngayo uElikana, wamnika uPenina umkakhe, noonyana bakhe bonke, neentombi zakhe, izabelo.
5 Ke uHanauHana wamnika isabelo sabantu ababini, ngokuba ebemthanda uHanauHana; ke uYehova ebesivalile isizalo sakhe.
6 Waza umkhweleteli wakhe wamana emchunuba, ukuze ade acunuke; ngokuba uYehova ebesivalile isizalo sakhe.
7 Wenjenjalo uElikana iminyaka ngeminyaka, xa wenyukayo ukuya endlwini kaYehova; wenjenjalo uPenina ukumqumbisa; uHana walila, akadla.
8 Wathi uElikana umyeniumyeni wakhe kuye, Hana, ulilelani na? Yini na ukuba ungadli? Yini na ukuba ibe mbi intliziyo yakho? Andilungile na kuwe ngaphezu koonyana abalishumi?
9 Wesuka uHanauHana emveni kokuba bedlile eShilo, emveni kokuba besele. Ke kaloku uEli umbingeleli wayeleli esilalweni ngasemgubasini webhotwe likaYehova.
10 Wawukrakra umphefumloumphefumlo kaHana, wathandaza kuYehova, wasitsho isililo.
12 Kwathi, ekuthandazeni kwakhe uzungu phambi koYehova, uEli wawugqala umlomoumlomo wakhe.
13 Ke yena uHanauHana wayethethela entliziyweni yakhe, kubebezela imilebeimilebe yomlomo wakhe yodwa, ilizwiilizwi lakhe lingavakali; uEli waba uyanxila.
14 Wathi uEli kuye, Koda kube nini na unxila? Yisuse iwayini yakho kuwe.
15 WaphendulaWaphendula uHanauHana, wathi, Hayi, nkosinkosi yam, ndingumfazi omoya unobunzima, andiselanga wayini nasiselo sinxilisayo; ndiphalaza umphefumloumphefumlo wam phambi koYehova.
16 Musa ukumbalela umkhonzazanaumkhonzazana wakho ekuthini yintombi yetshijolo; ngokuba unangoku ndithethe ngobuninzi bokukhalaza kwam nokuqunjiswa kwam.
17 WaphendulaWaphendula uEli, wathi, Hamba unoxolo; uThixouThixo kaSirayeli makakunike isicelo sakho osicelileyo kuye.
18 Wathi ke yena, Umkhonzazana wakho lo makababalwe nguwe. Wahamba indlelaindlela yakhe umfazi lowo, wadla, ababa samatsha ubusoubuso bakhe.
19 Bavuka kusasakusasa ngengomso, baqubuda phambi koYehova, babuya, bangena endlwini yabo eRama. UElikana wamazi uHanauHana umkakhe; uYehova wamkhumbula.
20 Kwathi ukufezeka kwemila, wamitha uHanauHana, wazalawazala unyanaunyana, wamthiya igamaigama elinguSamuweli, esithi, Kungokuba ndamcelayo kuYehova.
21 Yenyuka indodaindoda leyo inguElikana nendlu yayo yonke, ukuba ibingelele kuYehova umbingelelo womnyaka, inesibhambathiso sayo.
22 Ke yena uHanauHana akanyukanga; ngokuba wathi kwindoda yakhe, Kokha kulunyulwe umntwana, ndandule ke ukumzisa abonakale phambi koYehova, alale khona kude kuse ephakadeni.
23 Wathi uElikana indoda yakhe kuye, Yenza okulungileyo emelweni akho; lala ude umlumle; ke uYehova makalimise ilizwi lakhe. Walala ke umfazi, wanyisa unyanaunyana wakhe wada wamlumla.
24 Wenyuka naye, akuba emlumle, eneenkunzi ezintathu ezintsha, ne-efa yomgubo, nentsuba yewayini, wamsa endlwini kaYehova eShilo, umntwana lowo esemncinane.
25 Bayixhela inkunzi entsha, bamsa umntwana kuEli.
26 Wathi, Camagu, nkosinkosi yam! Uleli nje umphefumloumphefumlo wakho, nkosinkosi yam, ndingulaa mfazimfazi wayemi kuwe apha, ethandaza kuYehova.
27 Ndandithandazela lo mntwana; undinikile ke uYehova isicelo sam endandisicela kuye;
28 nam ndiya kumenza oceliweyo kuYehova; yonke imihla yokubakho kwakhe, woba ngoceliweyo kuYehova. Wamnqula khona uYehova.
IGenesis 11:30, 21:8, 24:45, 28:20, 29:32, 30:1, 22, 32:6, 43:34
Amanani 6:8, 30:7, 8, 12
IDuteronomi 12:6, 13:14
Yoshuwa 18:1, 25
Abagwebi 4:5, 7:15, 12:5, 13:5
URute 2:2, 13, 4:15
1 Samuweli 1:1, 19, 2:1, 11, 19, 20, 7:17, 8:4, 9:4, 14:36, 40, 15:34, 16:13, 17:12, 55, 19:18, 20:3, 42, 25:1, 26, 35, 29:7
2 Samuweli 7:25, 11:11, 15:9
2 Kumkani 2:2, 4, 6
EyokuQala yeziKronike 4:10, 6:12
IiNdumiso 20:5, 34:6, 62:9, 102:5, 120:1
ImiZekeliso 14:10, 31:2